Gợi ý 7 thực đơn tất niên cuối năm tại nhà đơn giản hấp dẫn thơm ngon | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Gợi ý 7 thực đơn tất niên cuối năm tại nhà đơn giản hấp dẫn thơm ngon | Muasalebang in Muasalebang
1 kuqalaImenyu 1
2 2Imenyu 2
3 33. imenyu
4 44. imenyu
5 5Imenyu 5
6 6Imenyu 6
7 77 imenyu
I-Appetizer: Isaladi yenkomo yasolwandle, irayisi ethosiwe, ama-shrimp spring rolls
Ukuza kumenyu yokuqala yokuphela konyaka u-Dien May XANH afuna ukukwethulela yona kuzoba ukubukeka kwama-appetizers kuqala!
Okokuqala, ukujwayela umkhathi wephathi, vuselela ukunambitheka kwawo wonke umuntu ngaphambi kokungena esifundweni esikhulu, okuyisaladi yezimila zasolwandle, ukunambitheka kokhula lwasolwandle okuvamile okuxutshwe nenyama yenkomo emnandi nethambile kanye nesaladi ecwebezelayo ecwebezelayo kuzokwenza ukunambitheka kwawo wonke umuntu kujabule.
Ngaphandle kwalokho, sibophe irayisi elishisiwe nezimfanzi kanye namaroli entwasahlobo yengulube. Ucezu ngalunye lwerayisi oluthosiwe lucwebile futhi lucwiliswe ngamanzi anongwe, anosawoti kanye namnandi abraised.
Ama-crispy spring rolls lapho udla, uzozwa izimfanzi ezintsha ezimnandi ezinososo kachili omncane futhi yilokho!
Izitsha eziyinhloko: Idada eliphekwe nesiphithiphithi, Irayisi elithosiwe ngokudla kwasolwandle, Imbuzi eshisayo ene-perilla, Ibhodwe lokudla kwasolwandle elixutshwe
Okulandelayo kuza inkambo eyinhloko engeke neze ikudumaze, iqala ngedada elinamafutha, elimnandi elithandwa yibo bonke.
I-fiber ngayinye yenyama yedada ethambile futhi enamanzi ihlangana ne-chao flavour ecebile, ephakelwa i-vermicelli entsha nemifino.
Ngokushesha kulandelwa irayisi elithosiwe lokudla kwasolwandle, elinokunambitheka kwamuva kwedada eliphekiwe kanye nelayisi elithambile elithosiwe elithosiwe, izimfanzi ezikhangayo kakhulu kanye nenyama ethonisiwe, ikakhulukazi lesi sidlo sinombala odonsa amehlo kakhulu.
Okulandelayo yimbuzi entsha nenomsoco ene-perilla, inyama yembuzi ethambile nehlafunwayo exutshwe nephunga le-perilla, okwenza ukunambitheka okuhluke kakhulu.
Ukwenza imenyu iphelele, kubalulekile ukuthi ube nesitsha esimnandi esixutshwe nesidlo sasolwandle esishisayo esikunikeza umuzwa ongachazeki.
Uphudingi: I-dessert yesithelo, isiphuzo esithambile esinekhabhoni
Ukuvala imenyu 1 izinhlobonhlobo zama-dessert ezithelo ezifana nekhabe, umango, amagilebhisi, uphayinaphu, … kokubili okumnandi futhi kunobumnandi bemvelo obusha.
Le menyu oyisebenzisayo neziphuzo ezibandayo ezinekhabhoni ukuze unciphise ukulangazelela futhi ujabulele ukudla okumnandi kakhulu.
I-Appetizer: Isaladi ye-tuna eneqanda elibilisiwe, isaladi le-Shrimp ne-Lemongrass
Ukuze sidale okuhlukahlukene ukuze ujabulele, siya kumenyu yesibili ene-appetizer yokuvula isaladi ye-egg tuna ebilisiwe elula futhi elula, engeza imayonnaise encane nejusi kalamula ukuze usize isidlo. Yidla okumnandi kakhulu.
I-appetizer elandelayo esinayo isaladi elimnandi lezimfanzi eligoqelwe i-lemongrass, isaladi lezimfanzi ezigoqwe nge-lemongrass bese ithoswa ngendlela ekhanga iso, okwenza umndeni wonke uyithande.
Izitsha eziyinhloko: Izimbambo zenyama yenkomo eyosiwe enoju, Umlenze wengulube ophekiwe onemifino, Ibhodwe elishisayo lenkomo
Ngemuva kwe-appetizer emnandi manje, isidlo esikhulu ngeke sikudumaze!
Izimbambo zenyama yenkomo eyosiwe ezinoju ziyacwebezela futhi zisagolide, ifayibha ngayinye yenyama igcwele izinongo ezithambile nezinephunga elimnandi ezingomile, ezikhipha iphunga elimnandi kakhulu.
Umlenze wengulube oyisitshulu wemifino uwukudla okuyinhloko okulandelayo kule menyu, umlenze wengulube othambile usalokhu ubambekile, udliwa nemifino emnandi kakhulu.
Masikwamukele ukumangala okuvela ku-hotpot yenkomo epholile enomhluzi omnandi, i-taro ethambile, inyama yenkomo ethambile, futhi sijabulele i-hotpot yenkomo eshisayo ngenkathi sibuthana nomndeni!
Uphudingi: I-Flan, isiphuzo esithambile esinekhabhoni
I-flan ethambile nenamafutha eyenziwe ngamaqanda nobisi olusha iyancibilika emlonyeni wakho ngokuqinisekile!
Xem Thêm Cách nấu lẩu phô mai | Muasalebang
Wena wenza i-dessert ngengilazi yesiphuzo esithambile esine-carbonated, okwenza izitsha zibe mnandi kakhulu, okwenza udle ngaso sonke isikhathi ngaphandle kokuzizwa unesizungu. Kokubili okumnandi nokumnandi yisiphuzo se-dessert esithandwa yiwo wonke umuntu.
Izithako zokudla: Isaladi yemifino, Ingulube ethosiwe yaseThai, iShrimp Spring Rolls
Woza no-Dien May XANH ngemenyu yesi-3 ohlwini namuhla. Okokuqala, sinesaladi yemifino enesikhumba esihle esidliwa kalula, esithandwa yibo bonke abantu besifazane.
Imifino esaladi iqukethe i-fiber namavithamini amaningi, inikeza isiqalo esimnandi sephathi yekhwalithi.
Uke wazama inyama yengulube ethosiwe yase-Thai okwamanje? Lesi isidlo esidumile sase-Thai nesithako esiyinhloko okuyingulube egayiwe kanye nesinongo esikhulu esenza iphunga elimnandi lamaqabunga esinamoni.
Ingulube egayiwe igaywa ngezinongo ezithosiwe kanye namaqabunga esinamoni ukuze kwakhiwe isidlo esinephunga elimnandi elenza wonke umuntu athandane.
I-appetizer ethandwa izinkulungwane zabantu ingulube nama-shrimp spring rolls, ama-crispy spring rolls, izimfanzi ezithambile nezinamafutha ngaphakathi zikhanga ngokwedlulele.
Izitsha eziyinhloko: Inyama yenkomo enesosi yenhlanzi, inyama yenkomo eBraised, ingwane ethosiwe ethosiwe, iHotpot enamahlumela oqalo kanye nedada.
Imenyu yesifundo eyinhloko elandelayo izokulethela umuzwa ojwayelekile, we-rustic emaphandleni aseVietnam.
Ubilise inyama yenkomo kahle, wabe usucwiliswa kusoso wenhlanzi, waphakwa ngezigaxa zepapaya ezinoshukela nezimuncu okunzima ukuzichaza.
Okulandelayo yisitsha senyama yenkomo eboshiwe okumelwe ukuthi wawujwayelene naso, ucezu ngalunye lwenyama yenkomo oluphekwa ngokuthambile nezaqathi namazambane, uma luphekiwe, lunombala onsundu omuhle osagolide, oluphakelwa isinkwa noma i-vermicelli Fresh luhlale lumnandi.
Ukulandela imenyu ingwane ethosiwe enoshukela futhi emuncu, i-fiber ngayinye ye-squid iqinile, inoshukela, futhi ukunambitheka kukaphayinaphu okumnandi nokumuncu kuyinhlanganisela ephelele.
Izitsha zamabhodwe ashisayo azivamisile ukuntula kumenyu enkulu yawo wonke amaphathi, uqalo lwedada ludubula ibhodwe elishisayo lizokwenza umsebenzi wokuphetha isidlo esikhulu sanamuhla. Umhluzi webhodwe elishisayo ucacile, inyama yedada ithambile futhi inamafutha, futhi amahlumela ase-crispy bamboo ahlinzekwa nemifino amnandi.
I-Dessert: iyogathi enamafutha
Iyogathi enerayisi elinamathelayo ithambile futhi imnandi. Lesi akusona nje isidlo esipholile nesiqabulayo kuphela, kodwa futhi isiphakamiso esifanelekile sokufaka kumenyu yama-dessert akhanga kakhulu omndeni wonke!
Ama-Appetizers: Isobho lenkukhu, ama-shrimp kanye nesaladi yenyama
Isobho lezinkukhu likhethwa omama abaningi bezindlu njenge-appetizer ngenxa yokunambitheka okumnandi, ukudla okulula ngaphandle kokukhathazeka ngokugcwala kakhulu ngaphambi kwezitsha eziyinhloko.
Ukwenza i-appetizer ibe mnandi kakhulu, sinesaladi yezimfanzi nezimfanzi ezimibalabala futhi ezinomsoco, inhlanganisela yezithako zokucwilisa ezinososo wenhlanzi omnandi nomuncu izokwenza ukuthi udle unomphela ngaphandle kokuzizwa unesizungu.
Isifundo esikhulu: I-snapper ebomvu ethosiwe, izimbambo ze-Lagu, izimfanzi ezishisiwe kabhiya, ibhodwe elishisayo lamakhowe okudla kwasolwandle
Ukwenza iphathi yokuphela konyaka ibe mnandi futhi ephithizelayo, masamukele i-snapper ebomvu ethosiwe ukuze sivule le menyu yesifundo yesi-4 eyinhloko.
I-snapper ebomvu ethosiwe yonke iyamangalisa, inhlanzi e-crispy icwiliswe nge-sauce yenhlanzi emnandi nemuncu, inikezwe nemifino embalwa eluhlaza ukuze ujabulele ukunambitheka okumnandi.
Ingabe ujwayelene kakhulu nezitsha ze-lagu ezicebile? Nge-Dien May XANH, thola izimbambo eziphekwe nge-lagu ezinezimbambo ezithambile zenyama yengulube ezifakwe izinongo, umhluzi onamafutha anephunga elimnandi odliwa nesinkwa uhlala usezingeni elifanele.
Okulandelayo siba nemfanzi eshunqa ubhiya engaziwa evuselela ukunambitheka, izimfanzi ezishiswe ubhiya zakha iphunga elingokwemvelo lemfanzi ngosawoti omncane kanye nopelepele oluhlaza ukuze kuqedelwe okuthunyelwe, kuqinisekiswe ukuthi wonke umuntu uzokuthanda.
Ukuze imenyu iphelele, ibhodwe elimnandi lekhwalithi yokudla kwasolwandle elishisayo lizokuletha kokuhlangenwe nakho okuhle, ibhodwe elishisayo, elishisayo lizokwenza ukuthi nithandane.
I-Dessert: itiye le-Khuc Bach
Lapho ujabulela itiye le-Khuc Bach, ungangeza noma yiluphi uhlobo lwesithelo oluthandayo, bese wengeza ama-alimondi athile bese ekugcineni wengeza ushukela neqhwa.
Uma ulidla, uzozwa ukuthambile, okumhlophe okuthambile, ukunambitheka okumnandi nokuqabulayo kwetiye kuhlanganiswe nesithelo kuzoba idessert yakho ephelele!
Ama-Appetizers: Isaladi yengulube yengulube eshisiwe, ama-Seafood spring rolls
Imenyu elandelayo i-Dien May XANH ekuphakamisela yona isaladi yengulube yengulube yempande ye-lotus ehlanganiswe namaroli entwasahlobo e-seafood ukuze enze isiphuzo.
Cishe wonke umuntu ujwayelene kakhulu nesaladi ye-lotus yengulube yengulube enokucubungula okulula nokusheshayo, ukunambitheka okumuncu kwezindlebe zengulube kanye nokushwabana kwezimpande ze-lotus kuletha umuzwa wenjabulo lapho udla.
Okulandelayo ama-hot seafood spring rolls, ama-crispy emlonyeni, lapho udla kakhulu, umlutha kakhulu.
Izitsha eziyinhloko: ukhari wenkukhu, izimfanzi ezithosiwe zikakhukhunathi, inkalankala nebhodwe elishisayo lenkomo
Ukuze wenze umcimbi wokuphela konyaka uphelele, isidlo esiyinhloko esivezwe kwimenyu elandelayo i-curry yenkukhu yendabuko, egcwele izwe laseVietnam.
I-fiber ngayinye yenkukhu ithoniswe ngezinongo ezicebile, umbala ophuzi ogqamile we-turmeric, futhi isoso ye-viscous isivele ikhanga futhi ayinakuvinjelwa.
Inhlanganisela elandelayo evela esitsheni se-coconut shrimp dish kokubili okumnandi futhi okungavamile, ama-shrimps athosiwe anombala omuhle obomvu ofihliwe ngaphansi kwesendlalelo se-coconut e-crispy, enamafutha kanye nephunga elimnandi, lapho uyidla kakhulu, yilapho ivuselela ukunambitheka.
Isiphetho esihle semenyu yesifundo esiyinhloko ibhodwe elishisayo elikhangayo kakhulu elinenkalankala nenkalankala yenkomo enomosi onamafutha wenkalankala nenyama yenkomo ehlafunwayo, umhluzi omnandi, ngokuqinisekile wonke umndeni uzonconywa.
Lapho udla, ungahlela inyama yenkomo, ubhontshisi othosiwe, izimbali zikabhanana nemifino eduze kwebhodwe elishisayo, ulungele ukumema umndeni wakho ukuba ujabulele.
Uphudingi: Isobho likabhontshisi obomvu
Isobho likabhontshisi obomvu i-dessert evala imenyu yanamuhla ngobumnandi obupholile, ubhontshisi obomvu uyinyama, udla uzozwa amafutha kabhontshisi obomvu ohlanganiswe nobisi lukakhukhunathi, ungafaka iqhwa ukuze uphake amakhaza nawo amnandi kakhulu.
Ama-Appetizers: Isaladi yenkomo enamahlumela, Iroli lenkomo elinamaqabunga aluhlaza, Inyama eyosiwe ngemali
Imenyu elandelayo i-Dien May XANH ekuphakamisela yona ngesaladi yenkomo enamahlumela ivula uhlu lwezithako zokudla, ezintsha nezikhangayo okungamele ziphuthelwe.
Inyama yenkomo ephekiwe ethambile exutshwe nesosi emnandi nemuncu kanye nokunambitheka okubabayo okumaphakathi kwamahlumela kushukumisa ukunambitheka, kuletha umuzwa oyingqayizivele esitsheni.
Okulandelayo umqulu wenyama yenkomo onephunga elimnandi elinamaqabunga e-guise ufafazwe ngamakinati athosiwe amnandi, kuhlanganiswe nenyama eyosiwe ye-kim money emnandi esakaza iphunga, ikwenze ungakwazi ukuhamba.
Izitsha eziyinhloko: I-squid efakwe inyama, inhlanzi ye-snakehead eshisayo enokhava, i-hotpot yokudla kwasolwandle yase-Thai
Sinawo ama-appetizers ekhwalithi, akunjalo? Manje kufika isidlo esikhulu esizokushiya ubambe ongezansi.
Eyokuqala ingwane egxishiwe enenyama, engakwazi ukukhanga kakhulu ngokugcwaliswa okumnandi nokumnandi okunokunambitheka okuqinile kwe-squid, ingaphandle iqinile futhi iqinile, futhi inyama icwiliswa nge-chili sauce ukuze ujabulele ukunambitheka kangcono.
Okulandelayo, inhlanzi eshisayo ye-snakehead ene-gourd eneresiphi ayikhethi kakhulu, kodwa kunzima ukumelana, inyama yenhlanzi ethambile nenamafutha exutshwe noselwa olumnandi, lobu bumnandi obumangalisayo, kufanele uzame kanye!
Ukuphetha imenyu yesifundo esiyinhloko isidlo se-hotpot yezinhlanzi zasolwandle esingenakuvinjelwa, isoso elimnandi lebhodwe elishisayo lithelwa endishini ye-vermicelli, futhi imifino ehambisana nayo imnandi! Ama-shrimp, ama-squid amasha aqinisekile ukuthi anenyama ecwiliswe ngosawoti oluhlaza kanye nopelepele.
Uphudingi: Itiye lobuhle
Isitsha esikhulu esingenhla sihle kakhulu, akunjalo? Uma kunjalo, masijabulele uphudingi wetiye lobuhle ukuze le menyu ibe kahle kakhulu!
Itiye lobuhle elimnandi, eliqabulayo, nelinomsoco elineresiphi elula kakhulu lizokwenza wonke umuntu athandane.
Ama-appetizers: Isobho le-crab, ama-spring rolls athosiwe
Uma sifika kumenyu yokugcina eyethulwa ngu-Dien May XANH namuhla ngephathi yokuphela konyaka, inhlanganisela yesobho lenkalankala namaroli entwasahlobo athosiwe ngeke ilungele kakhulu ukudla okumnandi.
Isobho lenkalankala elinokuvumelana okusesilinganisweni kanye nenhlanganisela yezithako zemifino, izimfanzi, inyama nenkalankala, isobho elimibalabala elinomsoco elenza ufune ukulidla ngokushesha.
Ngaphandle kwalokho, ama-spring rolls anephunga elimnandi, eyosiwe abe nombala osagolide ocwebezelayo, lapho uwabuka kakhulu, athandeka kakhulu, lapho uwadla, uzozwa ukunambitheka okucebile esihlokweni solimi lwakho, okumnandi ucezu lokugcina.
Izidlo eziyinhloko: Ingwane ebabayo ethosiwe, izimbambo ze-BBQ, izimfanzi ezishisayo ezinamanzi kakhukhunathi, ibhodwe elishisayo lenkukhu ye-Giang
Esigabeni sesifundo esiyinhloko, sinengwane ethosiwe ethosiwe kuqala. I-octopus ehlafunwayo ihlanganiswe ne-sauce ebomvu, engeza i-sesame encane ukuze uthuthukise ukunambitheka, okuhlinzekwa ngelayisi elimhlophe kuyinambitheka ephelele!
Okulandelayo izimbambo ezigosiwe ezine-sauce ye-BBQ, enombala omuhle kakhulu, ingaphandle i-crispy, ingaphakathi lithambile futhi limnandi, alimile nhlobo! Yidla izimbambo futhi uphuze iwayini, lena inhlanganisela ephelele yephathi yakho yokuphela konyaka!
Ngaphezu kwalokho, ubuye ube nesitsha sezimfanzi ezishisiwe esinamanzi kakhukhunathi esicutshungulwa kalula kodwa ikhwalithi ayikho etafuleni, ukunambitheka kwemvelo kwezimfanzi ezinoshukela kanye nephunga elimnandi lamanzi kakhukhunathi kwenza ukunambitheka kwekhaya kungachazeki.
I-chicken leaf Giang hotpot iyisidlo sokugcina ohlwini lwanamuhla esizokulethela imizwa eyahlukene, i-hotpot imnandi, inkukhu iqinile futhi imnandi, namahlamvu aba muncu futhi abamuncu, okuyenza ibe isidlo esikahle sokuhlangana kabusha. umhlangano womndeni.
I-Dessert: I-Jackfruit epholile, i-Coconut Ice Cream
Ungakwazi ukulungisa kalula i-jackfruit epholile ye-dessert yawo wonke umuntu, hhayi ukuxaka kakhulu kodwa okumnandi, wonke umuntu uyathanda.
Ngaphezu kwalokho, i-ayisikhilimu epholile kakhukhunathi, ukunambitheka okunamafutha kakhukhunathi kuzokulethela umuzwa wokuqabuleka nokumangala.
I-Dien May XANH isanda kukuphakamisela amamenyu okuphela konyaka ayi-7 anezidlo eziningi ezihlukahlukene nezikhangayo ngendlela engakhethi kakhulu kodwa eqinisekisa ubumnandi nekhwalithi. Ngethemba, amamenyu angenhla angakusiza wenze iphathi eyimpumelelo yokuphela konyaka ngokuzethemba.
Kuhlelwe ngu-Pham Hong Han • Kuthunyelwe ngoDisemba 8, 2021